पार्क भिजेको बेलामा होटल
होडलहरू vdnh (VVC)
हलो मस्कोमा आरामदायक र सस्तो होटेलको लागि हेर्नुहोस्? त्यसपछि नयाँ र आरामदायक मिनी-होटिक "रdeevu" "एलेक्स्स्कायामा एलेक्स्सेस्कायामा" यसको सेवाहरू प्रदान गर्न खुसी छ। सस्तो मूल्य, उच्च मानक सेवा, आरामदायक फर्नीचर र आधुनिक उपकरणहरू - यी सबै तपाईं हाम्रो कोठामा फेला पार्नुहुनेछ। हामी प्रत्येक पाहुनालाई सेवा र सान्त्वनाको गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्दछौं।
मस्कटवर्भ र मस्कोको यात्रामा सबै रूस प्रदर्शनी केन्द्रको प्रदर्शनीको हिड्ने दूरीमा अवस्थित छ। मरिसिन ग्रोव र रीगाको लागि एक घण्टासम्म पनि हाम्रो होटेलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईं "कनियर सुइट" र "सुइट" वर्ग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
मोरको लागि पर्याप्त महँगो शहर हो, त्यसैले तपाईले सबवेबाट पैदल यात्राको लागि दूरीको लागि एक सस्तो कोठा खोज्दै हुनुहुन्छ, तब एक सस्तो होटल "रdenvu"। एलेक्स्सेस्काया प्रति घण्टा भुक्तानीको साथ - तपाईंको लागि उत्तम विकल्प। हामी मूल अधिकारी र अधिकतम सान्त्वना दिन्छौं।
<< p> तपाइँ एक घण्टा, एक दिन, रात, केहि दिन वा घण्टाको लागि एक घण्टाको लागि कोठा भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ, हाम्रो होटेलमा हाम्रो होटल (मेट्रोले अलेक्साभेश्वर, रमी, मेरीना ग्रिभ) एक रोमान्टिक मिति र पर्यटकहरूको लागि आएका पर्यटकहरूको लागि उपयुक्त छ। तत्काल वरसाकमा पार्क ओस्टनकिनो र रूसी एकेडेमीको विज्ञान एकेडेमीको मुख्य बोटानिकल बगैचा हो, जसमा तपाईंले आफ्नो फुर्सत उज्यालो पार्नुहोस् र पूँजीको हल्लामा नलिनुहोस्।
कोठाको मानक सेटमा एयर कन्डिसन, टिभी, वाइ-फाई र बाथरूम र बाथरूम र बाथरूम र बाथरूम आवश्यक स्वच्छता र हेयरर्डहरू छन्।
मिनी-होटेलमा तपाईं ट्याक्सी, एयर र रेलवे टिकट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। खाना र पेय पदार्थहरूको वितरण घडी (कोठा-सेवा) को वरिपरि गरिन्छ। कर्मचारी होटलहरू "VDNH मा (WVC) ले गोल-क्लक सेवा प्रदान गर्दछ, न्यानो स्वागत र गोप्यता।
होटलको कोठाको करिवको लागि होटल कोठाको करिवको लागि कदर गर्नुहोस् "रान्डेभु" मूल हो। डिजाइनकारहरूले हाम्रो पाहुनाको कुनै मुडका लागि वातावरण र वातावरण बनाए। कोठा आरक्षण नि: शुल्क! तपाईं साइटमा वा फोन वा फोनबाट तपाईंलाई अनुमति दिन सक्नुहुन्छ
मा "रdeevu" मा कसरी प्राप्त गर्ने:
पाहुनाहरूको लागि अतिथि फ्रान्सहरू नि: शुल्क प्रदान गरिएको छ
Li> प्रस्थान -
फ्रन्ट डेस्कमा सफ्टहरू
नि: शुल्क इन्टरनेट पहुँच
<<<<<<<<<<<<<<<<। li> दर्ता विदेशी नागरिक - फ्री
आरक्षण Avia र रेल टिकट
इस्त्री र लाँड्री सेवा
व्यवसाय केन्द्र सेवाहरू: स्क्यान, प्रिन्टिंग, ईमेल - घडीमा, फ्रन्ट डेस्कमा;
सफ्ट पेय पदार्थ र आवश्यक वस्तुहरूको बिक्री - रिकटको वरिपरि,
नि: शुल्क प्रयोग होटल लबीमा।
होटल बोटलानीपक्षीय बगैचा र सबै-रूसी प्रदर्शनी केन्द्र (आईसीसी) को बिचमा अवस्थित छ र सबवेबाट हिड्ने दूरीमा टाढा। - बिहान सबेरै तपाईले सजीलो 1 15-20 मिनेट मस्कोको केन्द्रमा पुग्नुहुनेछ, र साँझमा, राजधानीको सब भन्दा सुन्दर र ठूलो पार्कमा आराम गर्नुहोस् "बोनज्यिक बगैंचा"।
हामीसँग घर मात्र छ। यो सिद्धान्त हो कि यदि हामी जीवित अवस्थालाई हाम्रो होटल र एक विशाल होटेलमा तुलना गर्छौं भने विशिष्ट हुन्छ।
<< p> होटल "Rus" ले चार श्रेणीको सहज कोठाहरू प्रदान गर्दछ: मानक, मानक सान्त्वना, जुनियर सुइट र सुइट। प्रत्येक कोठामा निजी बाथरूम, टिभी, एयर कन्डिसन र नि: शुल्क इन्टरनेट पहुँच (वाइफाइ तार) हुन्छ<
कुनै पनि समयमा पाहुनाहरूलाई खुशी हुन्छ, त्यसैले सबै सुविधाहरूको साथ एक आरामदायक कोठा प्राप्त गर्दै, तपाईं यसमा तपाईंलाई बस्न सक्नुहुन्छ। हामी विश्वस्त छौं कि यदि तपाईं एक पटक फेरि हाम्रो होट भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईं निश्चित रूपमा फिर्ता जान चाहनुहुन्छ। पाहुनाहरू जुन हामी चुपचाप र शान्तपूर्वक शान्तपूर्वक छौं, र हामी प्रत्येक पाहुनालाई विशेष ध्यान दिन्छौं। व्यक्ति जो व्यापार यात्रामा आउँछन् वा भ्रमणको लागि आउँछन् वेटेलको सस्तो सेवाहरूको फाइदा उठाउन र आरामदायी अवस्थाहरूमा केही दिन वा हप्ताहरू खर्च गर्छन्।
होटल को क्षेत्र मा नि: शुल्क सुरक्षित पार्किंग, सुक्खा सफाई र क्याफेस छ। क्याफेमा, तपाईं एक महाद्वीपले खाजामा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, साथै खाजा वा बेलुका खर्च गर्नुहोस्। क्याफेले युरोपियन युरोपेली र उच्चारणत्मक भाँडा माझे। हाम्रा पाहुनाहरूका लागि हामी लुगा धुने सेवाहरूमा छुट प्रदान गर्दछौं (एक्सप्रेस धुने, सुक्खा सफाई) - 20%।
को बारे मा जानकारी:
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उपलब्धिको प्रदर्शनी (VDH) ले मस्कोको सब भन्दा पुरानो प्रदर्शनी जटिल छ, जुन तिनीहरू सोभियत टाइम्सको अज्ञात समयमा घुमाउँछन्। राम्रो बन्न भाग्यशाली थियो। VDNH को क्षेत्र ठूलो छ, यो परिक्वक्ताको करिब22500 हेक्टरमा लिन्छ र यसको मापन मा एक सानो शहर को सम्झना छ।
EDC (VVC) को लागी धेरै सरल छ: प्रदर्शनी जटिल स्टेशनबाट करीव minutes मिनेट को लागी नजिकै जान्छ। प्रदर्शनी जटिल सुविधाजनक रूपमा अवस्थित छ र तुलनात्मक रूपमा यातायात राजमार्गहरू, सहज रूपमा योरोस्लाभल राजमार्गमा बितेको छ भने विश्वको प्रत्याशा अवस्थित छ।
<< p> होटेलहरू VDNH (WVC) को लागी सबै कुरा नगर्नुहोस् र सूची नगरेका छन्, ती मध्ये धेरै एक धेरै हिसाबले निर्माण गरिएको समयमा निर्माण गरिएको छ। अवश्य पनि, सबै होटलहरू, सबैभन्दा उल्लेखनीय एक ब्रह्माण्ड होटेल हो, सन् 1 1980 .0 मा मस्को ओलम्पियाडको उद्घाटनमा निर्माण गरियो। ब्रह्माण्ड होटेलका धेरै कोठाहरूको विन्डोजबाट, VDNH (WVC) को क्षेत्रको मनमोहक परिश्रमको दृश्यहरू खुला छन् - एक अविस्मरणीय तमाशा।
स्पेस होटल VDNHH (WCC) को नजिकको होटल हो। होटेलबाट मार्ग प्रदर्शनी केन्द्रमा minutes मिनेट भन्दा बढि लिनेछ।
होटल सुनौलो कोलोस VDNH (VVC) नजिकको सबैभन्दा बजेट हो। होटलमा VDNH (WVC) बाट सडक -10-10 मिनेट लिन सक्दछ। यो संसारको प्रोस्पेससमा जान आवश्यक छ, ब्रह्माण्ड हटाउने होलमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, होटल सुनौलो कोलोस को सबै छ भवनहरू अवस्थित छन्।
लोकप्रिय स्थानहरू तपाईले नजीक भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ: फ्रुस्टेन मैत्री व्यक्ति, रूसी एकेडेमीको विज्ञान र ओलम्पिक खेल परिसर को प्रमुख बोटआन्दव बगैंचा। नजिकको एयरपोर्टको एयरपोर्ट arentstyevo अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट - 1 .. किलोमिटर। यो ठाउँ सस्तो युवा यात्राको लागि उत्तम विकल्प हो।
सबैको एउटा अवस्था थियो जहाँ एयरक्राफ्ट वा बसमा केही घण्टा छोडियो, र शहर वरिपरि हिंड्दैन या त मौसम हुँदैन। त्यस्ता अवस्थाका लागि तिनीहरू एक घण्टाको लागि होटलको रूपमा यस्तो सेवाको साथ आए। तर दुर्भाग्यवस, प्रत्येक संख्यामा त्यस्तो प्रकारको सेवा हुँदैन, यद्यपि यो एक अत्यन्तै रमाईलो प्रस्ताव हो, एक व्यक्ति को रूप मा, मानिसहरूको संगत को रूप मा। मूल रूपमा, कोठाहरू दैनिक आवासको लागि भुक्तान गर्छन्, र यसले कति जना मानिस बस्ने भनेर फरक पार्दैन।
एक घण्टाको लागि होटल - / H2>
एक घण्टाको लागि आवास विकल्प विचार गर्दै, तपाईं कोठामा बसेको समयको लागि मात्र भुक्तान गर्नुहुन्छ। यस प्रकारको सेवाको हाम्रो संस्था "cyparis" भनिन्छ, किनकि यस होटलमा एक घण्टा VDNH मा एक घण्टाको लागि, तपाईं कुनै पनि घटना आशा गर्न सक्नुहुनेछ।
हालको महामारी स्थितिको सम्बन्धमा, विशेष रोमान्टिक प्रस्तावहरू अब उपलब्ध छैनन्।